ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိသားစုဦးရေ အများဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ သူများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingကမ္ဘာပေါ်မှာ မိသားစုဦးရေ အများဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ သူများ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိသားစုဦးရေ အများဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ သူများ
September 21, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိသားစု ဦးရေ အများဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ သူတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လောက်တောင် မျသားစု လူဦးရေ များလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ The Zionas
Zionas လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသားကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသက် ( ၁၇ ) နှစ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ပထမ ဇနီးဖြစ်သူ Zathiangi နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ Zionas မှာ ဇနီး ( ၃၉ )ယောက် နဲ့ ကလေး ( ၉၄ ) ယောက် တို့ရှိပြီး အကြီးဆုံး မိသားစု တစ်ခု ဖြစ်လို့နေပါတယ် ။ ဒီလို များပြားတဲ့ မိသားစု ဦးရေ အတွက် တစ်နေ့ကို ဆန် ပေါင် ( ၂၀၀ ) နဲ့ အာလူး ပေါင် ( ၁၃၀ ) ကို ချက်ပြုတ်ရတာပါ ။ နောက်ပြီး လူဦးရေ များတဲ့ အတွက် အခန်းပေါင်း ( ၁၀၀ ) ပါတဲ့ အိမ်ကို ဆောက်ကာ နေကြပြီး မွေးမြူရေးနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ရှာဖွေ စားသောက်ကြပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ The Bates
The Bates လို့ ခေါ်တဲ့ မိသားစုဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ကလေး ( ၁၉ ) ကို မွေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိဘ ဖြစ်သူ Gil နဲ့ Kelly တို့နှစ်ယောက်ဟာ ( ၁၉၈၇ ) ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အစောပိုင်းကတော့ အခုလိုမျိုး ကလေးအများကြီး မွေးဖို့ကို စိတ်ကူးမထားမိဘူးလို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လင်မယားဟာ ပထမဦးဆုံး ကလေး မွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ကလေး မွေးရတာကို ချစ်သွားပြီး ဆက်ပြီး ကလေးတွေ မွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး Gil တို့လင်မယားဟာ ( ၂၀၁၂ ) ခုနှစ်အထိ ကလေးတွေကို ဆက်ပြီး မွေးခဲ့ကြပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ သူတို့မှာ သားသမီး ( ၁၉ ) ယောက်ရှိတဲ့အပြင် မြေး ( ၁၄ ) ယောက်ပါ ထပ်တိုးလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ The Hanns
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့် The Hanns မိသားစုကတော့ စကော့တလန် နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Emma နဲ့ Roy တို့ လင်မယားတို့မှာ အသက် ( ၂ ) နှစ် ကနေ စပြီး အသက် ( ၂၅ ) နှစ် အထိ ရှိတဲ့ ကလေး ( ၁၃ ) ယောက်ကို မွေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတိုကလင်မယားမှာ Roy ကတော့ သူနာပြု ဆေးအကူ ဖြစ်ပြီး Emma ကတော့ အိမ်ရှင်မ တာဝန်ယူကာ ကလေးတွေကို ကျွေးမွေးဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို နွားနို့ ( ၁၀ ) ပုလင်း ၊ ပေါင်မုန့် အလုံး ( ၂၀ ) နဲ့ Cereal အထုပ်ကြီး ( ၅ ) ထုပ် ကုန်ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ The Radfords
Noel နဲ့ Sue တို့ လင်မယားဟာ အသက်ငယ်ငယ်လေး နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးကို လက်ထပ်ပြီး ( ၁ ) နှစ်အကြာမှာ မွေးခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ သူတို့မိသားစုဟာ ဗြိတိန်မှာ အကြီးဆုံး မိသားစု ဖြစ်ပြီး ကလေး ( ၂၂ ) ယောက်ကို မွေးထားတာပါ ။ အခုအခါမှာတော့ Radfords တို့ မိသားစုတွေဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၊ Morecambe မှာ Radford’s Pie Company လို့ ခေါ်တဲ့ ကိတ်မုန့်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားပြီး အတော် အောင်မြင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ The Duggars
Jim နဲ့ Michelle တို့ နှစ်ယောက် ( ၁၉၈၀ ) တုန်းက Arkansas မှာ စတင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ဟာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ( ၄ ) နှစ် အကြာမှာတော့ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ လင်မယား ရဲ့ ပထမဦးဆုံးကလေး လေးကိုတော့ ( ၁၉၈၈ ) ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ ။ လက်ရှိမှာတော့ The Duggars မိသားစုမှာ ကလေး ( ၁၉ ) ယောက် အထိ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး ဒီအထဲက ကလေး တစ်ဝက်ကတော့ အိမ်ကျောင်းပဲ တက်ကြပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Jim နဲ့ Michelle တို့ လင်မယားမှာ မြေး ( ၁၇ ) ယောက်လည်း ရှိပါသေးတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိသားစုဦးရေ အများဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ သူများ အကြောင်းကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ကမ္ဘာ့သမိုင်းထဲမှာ အချိန်အတိုဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲများ